Uvaleke waphenduka iphaseji umgwaqo waseMpola ngenxa yesonto | isiZulu
eThekwini - Uphila kanzima umphakathi waselokishini laseMpola eThekwini njengoba usuze wavaleka thaqa umgwaqo ngenxa yokwakhiwa kwesonto elikhulu kwaze kwavaleka indlela ehamba izimoto.
Le ndlela nokungumgwaqo 49 ngokwamabhuku omthetho ivaleke yaphenduka iphasiji elilingana ibhayisikili kuphela.
Lokhu sekuvele kwayenza yabanzima kakhulu impilo yezakhamuzi zakule ndawo ezithi zivaleleke emagcekeni nezimoto zazo.
Abanye bacelela izimoto komakhelwane emzini engenhla ngoba ayikho indlela yokuthi zingabuye zipake emagcekeni.
UBaba uBobo Hadebe oseyikhehla eliqinile uthi kabakhaleli izimoto zabo kuphela abangasakwazi ukuhamba ngazo ngoba akukho lapho ezingahamba khona.
Kodwa okubuhlungu kakhulu wukuthi izimoto zabosizo lokuqala, kazikwazi ukufinyelela kubo naomakhelwane uma kukhona oxinekile.
“Ngelinye ilanga kwenzeka into ebuhlungu kabi lapha, omunye womakhelwane wayegula ebangwa nezibi kwaze kwabizwa i-ambulensi.
“Le ambulensi yafike yama le phezulu ngesimo sokuthi ayikho indlela yokuhamba lapha. Kwadingeka ukuba amakhosikazi endawo alekelele umakhelwane kuqutshulwe le ndoda ihanjiswe kwabosizo lokuqala le phezulu.
Isimo sakhe sasisibi kangangokuthi umphefumulo wesiguli waphumela emhlani kamakhelwane okwakunguyena owayemubelethile bemuphuthumisa phezulu.
Kwathi kusenjalo, kwaqala enye inkinga yokuthi kwamoto yomngcwabo eyayizolanda isidumbu, kayikwazi ukungena. NgoLwesihlanu isidumbu sifika, kwasebenza omakhelwane besilanda le phezulu besingenisa eKhaya.
NgoMgqibelo sekuphuma umngcwabo, kwaba yileyo ndaba yokukhuphula isidumbu sihanjiswa le phezulu ngoka kayikho engenayo futhi kayikho ephumayo imoto kule ndawo.
UBaba uHadebe uthi sekwaze kwaguga izicathulo behambela kwaMasipala bedinga usizo.
“Okubuhlungu kakhulu wukuthi sesaze sabiza o-sarveyor bazohlola ukuthi ngabe yithina na esimsukelayo omnikazi wesonto leli noma nguyena osephutheni ngokwakha isithabathaba sebandla elize lagamanxa emgwaqeni.
“U-Survayor, kanye nabakwa-Ombudsman bafike basho ukuthi ngempela umnikaze weSonto kumele aligudluze lihlehlele emuva ukuze ibonakale indlela yesonto.
UChris Marais ongu-Land Surveyor ukuqinisekisile ukuthi waqashwa wumphakathi wakule ndawo ukuzohlola ukuthi ngabe leli sonto lakhiwe ngendlela efanele na.
"Ngathi ngifika ngizohlola isimo ngabona ukuthi leli sonto lakhiwe lase lawela kumgwaqo ongunombolo 49, ngokohlelo lwemigwaqo. Kwabe sekwenziwa isiphakamiso ngosizo lwe-Ombudsman ukuba leli sonto kumele lihlehle ukuze uvuleke futhi umgwaqo.
Ubaba uHadebe uthi wayelokhu ehla enyuka emahhovisi kaRaj Sign oyisikhulu sikaMasipala weTheku eMnyangweni wezemigwaqo, kodwa kunokuthi asizakale ngokuvulwa kwale ndlela, umasipala ubebatshela ukuthi kayikho imali yokwakha umgwaqo.
Yize bukhona ubufakazi bokuthi indlela kayisekho, futhi sebexakekile abantu bakule ndawo njengoba sebefana neziboshwa emakhaya azo nezimoto zabo, akekho ophumela obala nokuthi kumele kwenziwe njani.
“Ngahamba ngaze ngaba mfishane ngigqigqa emahhovisi kaMasipala sifuna usizo ngalolu daba, kodwa lutho.
"URaj Singh okunguyena engathunyelwa kuyena wakubeka kwacaca ukuthi isabelo sezimali kasibavumeli ukuba bangafaka utiyela kule ndawo.
Ngamtshela ukuthi ngisho ungasafakwanga utiyela kodwa sikhala kakhulu ngokuba basivulele indlela izimoto zikwazi ukuhamba, nabosizo lokuqala bakwazi ukufinyelela nakithi uma sinenkinga singaze sifele emakhaya, izinsiza zokuthutha zikhona.
Omakhelwane bakhe uHadebe bakhala ngokufanayo.
“Okuphoxa nokusizwisa ubuhlungu kakhulu wukuthi iKhansela le ndawo uSifiso Ngcobo, wayesikhohlisa, ekhankasa ngokuthi uma sike samuvotela uzoqinisekisa ukuthi le nkinga yethu iyaxazululeka.
Esikhundleni sokusilamulela, kwavele kwakhiwa itiyela elisuka emgwaqeni omkhulu liphelela kubo kwakhe uNgcobo, akaphindanga wabuyela kuthina ngesisombululo sale nkinga.
Sizamile ukuxhumana noMasipala weTheku wathi kawukwazi ukuphawula ngalolu daba okwamanje basazophenya.
Nawu mgwaqo waseMpola osunciphe waphenduka iphaseji ngenxa yokwakhiwa kwesonto. Izakhamuzi zakhona zihleli nezimoto emagcekeni ezingenandawo yokuhamba @eThekwiniM ubamba uyayeka uma ebuzwa ngalokhu, ayiphathwa eyekhansela lakhona elivele lidle amazambane ashisayo pic.twitter.com/BeOzj3IbEU
— Nkuli Nhlapo (@NduNhlapo) May 11, 2018